ॐ श्री माता पाथिभराकि जय! माताको कृपाले सबैको दिन सुखमय बनोस् ०७६ पुष ११ गते शुक्रबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य यस्तो! – " कञ्चनजंगा News "
ॐ श्री माता पाथिभराकि जय! माताको कृपाले सबैको दिन सुखमय बनोस् ०७६ पुष ११ गते शुक्रबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य यस्तो!
No Comments on ॐ श्री माता पाथिभराकि जय! माताको कृपाले सबैको दिन सुखमय बनोस् ०७६ पुष ११ गते शुक्रबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य यस्तो!
मेष : व्यापार व्यावसायमा लगानी गर्न केहि समय कुर्नुनै पर्नेछ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ ख्याल गर्नुहोला । पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ । प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ । पढाइको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ र लेखन कलामा निखारता आउनेछ। अध्ययनका लागि भ्रमणको मौका जुट्न सक्छ ।संगत गर्दा ध्यान दिनुहोला गलत मानिसको फन्दामा परिन सक्छ । धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्दा बिचार गर्नुहोला कष्टकर पनि हुन सक्छ ।
मिथुन: हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । नोकरी अथवा व्यवसायसँग सम्बद्ध कुनै ठोस परिणाम देखा पर्नेछन् । नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न सकिनेछ । आयआर्जनका विविध स्रोत फेला पर्नेछन्। तर श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफलका लागि समय पर्खनुपर्नेछ। आँटेको कामको लगानी पनि अरूका लागि खर्च हुन सक्छ। सरसापटमा धन बाहिरिने देखिन्छ । आम्दानी रोकिनाले कर्जाको रकम लिनुपर्ने हुन सक्छ। प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले अवरोध पुर्याउन सक्छन्।
← भगवान शिवको घाँटीमा रहेको मुण्डमालाको यस्तो रहेछ रहस्य → यी देवी देवताको मूर्ति घरमा राख्दा अशुभ हुने